Ukubheja kwimarike yemasheya okuneziqholo kakhulu ekwindla | Ezezimali
Ngalo lonke ixesha ukubheja kwizitokhwe ezinoburharha kunokunika ibhaskiti yethu yezabelo inzuzo enkulu. Nokuba indleko ye thatha umngcipheko ngakumbi ngokungathandabuzekiyo uqhuba olu hlobo lwemisebenzi kwiimarike zezabelo. Iya kuba licebo eliluncedo ngakumbi kwezona meko zintengiso zentengiso. Kungenxa yokuba ngale ndlela, iingeniso zemali eyinkunzi ziya kuba nkulu ngakumbi, nangona ngesizathu esifanayo ungaphulukana nemali ethe kratya kwezona zinto ziphantsi zolu rhwebo lwezezimali.
Ukuze ukwazi ukwakha iphothifoliyo yezi mpawu, uya kuba neendlela ezingaphezulu kwesinye ezinokwanelisa le mfuno yokutyala imali. Ewe awuyi kufumana ukhuseleko lwenqanaba lokuqala, kodwa ngokuchaseneyo, ukubonelelwa kwesitokhwe kuya kuba kweenkampani ezincinci neziphakathi. Ayothusi into yokuba ngabona bantu basemngciphekweni kolu hlobo lomsebenzi. Ngokukodwa, ngenxa yokuguquguquka kwayo okuphezulu kwikoteyishini yamaxabiso ayo. Apho iseshoni enye yokurhweba inokufikelela khona yiya kwi-5% okanye nangakumbi kwezinye zeemeko ezifanelekileyo.
Ngayiphi na imeko, akukho lula ukuba wabele yonke imali oyigcinileyo kule mi sebenzi. Akukho ndlela ukuba ufuna ukukhusela izikhundla zakho. Ngokuchasene noko, I-20% yemali yakho iya kwanela ziyafumaneka ukuze ukwazi ukusebenzisa kangangoko okonga kwakho ngeyona ndlela ibhetele. Kwizenzo ezingekho ngaphezulu kwexesha elide. Isicwangciso-qhinga sakho siya kuba nezikhundla zokuvala kwezi stocks ngalo mzuzu kanye xa ugqume iinjongo zakho. Ngaphandle kokulinda ukuphononongwa ngakumbi kuba inokwenza ingozi eyongezelelweyo enokuthi yehlise intsalela yepotifoliyo yakho yotyalo-mali.
1 Ibhasikithi yezabelo: Azcoyen
2 Ukuphucula icandelo lobuchwephesha kwi-Europac
3 Inditex inokuvuka kwakhona
4 I-Adidas: ithuba kwi-Eurostoxx
5 ICie Automotive, phakathi kweentandokazi
6 UDuro Felguera ngokuqikelela
Ibhasikithi yezabelo: Azcoyen
Ngeli xesha, ukuba kukho isihloko esinobukho obungenakoyiswa kuhlalutyo lobuchwephesha, ngokungathandabuzekiyo kule nkampani. Ukuya kwinqanaba lokuba ezinye zeengcali ze-equity ezaziwayo zibona njengento oyithengileyo kwiimarike zezemali. Esinye sezizathu zokuseka esi sigqibo sisekwe kwinto yokuba senziwe kwenye yeenkampani ezidwelisiweyo nge-PER esezantsi wentengiso epheleleyo kazwelonke. Isizathu esingaphezulu kokulingene kukunika ngaphezulu kovuyo olunye kwezi zihlandlo. Ayothusi into yokuba izabelo zalo zikhuphuke ngaphezulu kwama-65% kwezi nyanga zilishumi elinambini zidlulileyo. Kwesinye sezona zindululo sinenzuzo kwizabelo zeSpain.
Nangona kunjalo, ukwanda kwexesha elide kunokuba nefuthe elibi kwixabiso lalo. Kuba ngaxa lithile inkunzi yenkomo yayo ebalekayo iya kuyekwa. Okanye ubuncinci uye kwenye Isigaba sokudibanisa ukuba ngaphandle kwamathandabuzo inokuhlala ixesha elide. Ngumngcipheko oya kuthi ujongane nawo ukuba ufaka eli xabiso kwibhasikithi yezabelo ozenzileyo. Ukusuka kolu luvo, isenokungabi lelona xesha lilungileyo lokuthatha isikhundla kule stock esithetha ngayo. Nangona isenokubanakho ukuphinda ivavanywe kufutshane ne-15%. Ukwazi ukuba ezi zibikezelo azisoloko zizalisekiswa kuba yinto exhomekeke kwiimeko ezininzi.
Ukuphucula icandelo lobuchwephesha kwi-Europac
Esinye sezindululo onokuzikhetha ngeli xesha yile nkampani idweliswe kwiimarike zesekondari. Ngokukodwa kuba iphucule kakhulu ubuchwephesha bayo. Ukuya kwinqanaba lokuba kunokuthiwa kudlulile kumjikelo olunge ngakumbi kunalowo ucwangcisiweyo ukuza kuthi ga ngoku. Umkile ekubeni kwimeko ukusuka kwi-rebound ukuya kudityaniso. Ukuziqhelanisa kuthetha ukuba ungazibandakanya nemisebenzi yabo. Nangona kunjalo ngayo yonke imingcipheko ebandakanya olu didi lokhuseleko.
Ngayiphi na imeko, unengxaki enkulu yokuba izihloko ekuvunyelwene ngazo zimbalwa. Ubutywala ayisiyiyo enye yeendlela zabo eziqhelekileyo. Kodwa ngokuchaseneyo, unokubambeka kwizikhundla zabo ngamanye amaxesha okanye enye. Oku kwenza ukuba i-Europac ibheje kakhulu kwaye kufuneka ukhethe esi sigqibo njengoncediso kutyalo-mali lwakho oluphambili. Ukuba kunjalo, izinto zingangcono kuwe njengoko uya kunciphisa ukungaqiniseki kwizikhundla ezithathiweyo.
Inditex inokuvuka kwakhona
Phakathi kwexabiso elikhulu lezabelo zaseSpain, inkampani eyolukiweyo yenye yezona zinto zibalaseleyo zokubheja onokuthi uzithathe kulo mzuzu. Ngokukodwa kuba kubonakala ngathi ukwehla kwayo kuphelile. Ukulungelelanisa isigaba esitsha sokudibanisa apho ihambe khona ukusuka kwisindululo sokuthengisa ukuya kweso sokubamba okanye nokuthenga ngokutsho kwabahlalutyi bezemali. Ngoncedo lwe imodeli yeshishini ephumelelayo kwihlabathi liphela. Ngokusasazwa kwisahlulelo sayo esivelisa imbuyekezo kulondolozo lwakho lwe-3% okanye ye-4%.
Ngale ndlela, elinye lamaqhosha afanelekileyo okwazi ukuba ungazingena na izikhundla zabo lilele ekupapashweni kweziphumo zabo zeshishini. Emva kokuba ethile ukuphoxeka kwiikota zamva nje Kwaye babangele ukuba izabelo zabo zehle. Ngokugqithileyo ngokwabahlalutyi bezemali abalandela eli xabiso. Konke emva kokuba unyaka nonyaka kukhula ngokungakhathali kwiimarike zezemali. Ke ngoko, kuya kufuneka ulinde ixesha elincinci ukuze wazi esona sigqibo kuya kufuneka usenze ukusukela ngoku.
I-Adidas: ithuba kwi-Eurostoxx
Ayisiyiyo kuphela kwii-equity zesizwe apho kukho amathuba okwenza ulondolozo lwethu lube nenzuzo. Kwifayile ye- isalathiso saseYurophu, Eurostoxx 50, unokufumana ixabiso elishushu elinokubonelela ngenzuzo kwimisebenzi. Ngale ndlela, i-Adidas yenye yeendlela zokubheja ezineyona nto ilungileyo ngalo mzuzu. Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba liyaphindaphindeka kwiiseshoni zokurhweba zamva nje ngamandla athile. Ngomdla omkhulu kubatyali mali abancinci nabaphakathi. Kwelinye icala, iyonyuswa ngokonyuka okufanelekileyo kumthamo weekhontrakthi.
Esi siphakamiso sezabelo zamazwe aseYurophu sibhaptiziwe kwindawo enokubangela umdla kakhulu ukuthatha isikhundla ukusukela ngoku. Ngokuphinda uhlaziye, ngokweembono zabahlalutyi bezemali, Amanqanaba aphakathi kwe-10% ne-25%. Iya kuhlala iyindlela elungileyo yotyalo-mali okoko nje imeko yentengiso yehlabathi iqhubeka. Kungenxa yokuba ukuba le meko iyatshintsha, ngekhe kungabikho ngqiqweni ukulungisa amaxabiso aqinileyo. Ngokubuyela kutshintsho lokuchonga ixabiso lezabelo zakho.
ICie Automotive, phakathi kweentandokazi
Ukusuka eMirabaud bayagqama njengenye yeendlela ezonelisayo kwiCie Automotive. Bachaza ukuba sesinye sezindululo esinokubaluleka okuphezulu kakhulu. Iingcali zeli qela lotyalo-mali zinika isindululo esicacileyo sokuthenga kunye Ixabiso ekujoliswe kulo le-23,8 euro ngesabelo ngasinye. Ukuba ezi njongo ziyafezekiswa, izabelo zale nkampani ziya kuba nomda wokuphucula amaxabiso e-5% ukusuka kumaxabiso abo. Akunakulityalwa ukuba ukusukela ekuqaleni konyaka izabelo zayo zixatyisiwe ngaphezulu kwe-20%. Le nto inokuba yingxaki kubatyali zimali abancinci nabaphakathi ukuba bathathe izikhundla ngenxa yokoyika ukuba izilungiso ezinzulu zinokwenzeka phambi kokuphela konyaka.
Ngayiphi na imeko, iintshukumo zenkampani ezijikeleze inkampani zinokubakho. Ukuba kunjalo, inokuba sisisulu sonyuko olongezelelekileyo kwiimarike zezemali. Kodwa eyona ngxaki iphambili kukubafumana kwangoko ngokwaneleyo ukuba basebenzise le meko. Ayothusi into yokuba kukwiindawo ezinqamlezayo zezinye iinkampani ezidweliswe kwizabelo. Into enokuba luncedo kakhulu kwimidla yabo kwaye inokuba nefuthe kubatyali mali.
UDuro Felguera ngokuqikelela
Lo Inkampani ekuluhlu sesinye sezona zitokhwe zisebenzayo kwimarike yaseSpain. Amahemuhemu ahlala ephantsi kwawo abangela ixabiso lawo udubula ngamandla amakhulu, kwaye ihamba nomthamo omkhulu wokugaya abantu. Kodwa ke lumka kakhulu ngale ndlela, kuba ukuba la magqabaza awaqinisekiswanga, ukhuphelo lunokwenziwa ngendlela efanayo. Njengoko kwenzekile kwezinye zeeseshoni zokugqibela zentengiso yemasheya. Ngesi sizathu, ulumkiso olukhethekileyo kufuneka lwenziwe xa kusongezwa eli xabiso kwipotifoliyo yabasebenzisi.
Ukuba iintshukumo zikaDuro Felguera zibonakaliswa yinto ethile, kungenxa yakhe ukungazinzi okuphezulu. Apho inyuka ngokufanayo iipesenti ezi-6 njengoko isihla phantsi kweepesenti ezifanayo. Ukuya kwinqanaba lokuba kuya kufuneka ubetheleleke kakhulu ukungena nokuphuma kwiimarike. Apho nasiphi na isiliphu sinokuxabisa abasebenzisi kakhulu. Apho uninzi lwee-euro lunokushiywa endleleni ukuba azichazwanga sesona sicwangciso silungileyo. Ingxaki yokuqala oya kuyifumana ukusukela ngoku. Imingcipheko iya kuba phezulu kunakwamanye amazwe alinganayo. Kodwa yinto ekufuneka uyicinge phantsi kokunyusa amathemba akho okuphucula imbuyekezo kulondolozo lwakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Bolsa » Ukubheja kwimarike yemasheya okuneziqholo kakhulu ekwindla
Iintshukumo eziya kufana nokudutyulwa ngamaxesha emfazwe